စိတ်မပျက်နဲ့ ကွယ်…ကလေးရယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » စိတ်မပျက်နဲ့ ကွယ်…ကလေးရယ်
Posted by ရွှေအိမ်စည် on Jul 14, 2011 in Copy/Paste | 18 comments
ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာရှိနေတဲ့ ရင်သွေးငယ်ပေါင်းများစွာဟာ ကံဆိုးနေရှာတယ် သူတို့ လေးတွေဟာ ဆာလောင်ခြင်း နာကျင်ခြင်း ၊ ငတ်မွတ်ခြင်းဆိုတဲ့ ဒုက္ခပေါင်းများစွာနဲ့ ကူညီသူမဲ့ဖြစ်နေရရှာပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ နေထိုင်ရာ မြန်မာပြည်မှာလည်း ရင်သွေးငယ်ပေါင်းများစွာဟာ ကံဆိုးနေကြဆဲပါ၊အမိအဖမဲ့ ရင်သွေးငယ်များအတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နွေးထွေးတဲ့အကြင်နာဆေးဝါးလေးဟာ သူတို့လေးတွေ နှလုံးသားထဲမှာလိုအပ်နေကြပါတယ်။
ကမ္ဘာကြီးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မည့်မျိုးဆက်သစ် လူသားအရင်းအမြစ်များကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အကြင်နာလက်များနဲ့တွဲခေါ်ပြီး သူတို့လေးတွေရဲ့အနာဂတ်များထွန်းလင်းတောက်ပစေအောင် လုပ်ဆောင်ကြပါစို့ဗျာ..။
နောင်တစ်ချိန်မှာ သူတို့ရဲ့အစွမ်းအစလေးတွေနဲ့ပိုမိုတိုးတက်တဲ့ အနာဂတ်ကို ဖန်တီးနိုင်မယ်ဆိုတာ မယုံကြည်ပေးလို့မရပါဘူး။
ဒီလိုမျိုးအရေးပါလှတဲ့နောင်တစ်ချိန် အားကိုးရမဲ့ အနာဂတ်ရဲ့ရင်သွေးငယ်ပေါင်းများစွာအပေါ်မှာ-
* ဘာကြောင့်များကျွန်တော်တို့ ပစ်ပယ်မိနေကျတာလဲ…?
* ဘာကြောင့်များ ကျွန်တော်တို့ မစဉ်းစားပေးကျတာလဲ…?
* ဘာကြောင့်များ အကူအညီအလုံအလောက်မပေးနိုင်ရတာလဲ…?
ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးအတွက်၊ ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့ ကလေးလေးတွေအတွက်
့စိတ်မပျက်နဲ့ ကွယ့် 
ဂျက်ကော့ဇူးမား က ကလေးအတွက်စံနမူနာ ပါကွယ်…၊
ပြုပြင်မှုရောင်ခြည်လာပါမှာမလို့ အားမလျှော့ လိုက်ပါနဲ့ ကွယ်……။
ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်မပျက်နဲ့ ကွယ်……….
ကမ္ဘာဆိုတာ လူတိုင်းကို ဗဟိုပြုလည်နေတာပါကွယ်…………….။
there isachoice we are making
စောင်.ရှောက်မယ်ဆိုလည်း ကျွန်တော် သားလေနှစ်ယောက် အနှစ် 20 လောက်ခေါ်ကျွေးထားပေးပါလား
ကျွန်တော် အေးအေးဆေးဆေး စီးပွား ရှာပြီး ချမ်းသာမှ ပြန်လာခေါ်မယ် ဟဲဟဲ
စတာနော် အနော် ကလူပျိုစစ်စစ်လေးဗျှ
ဒီက အဆိုတော်အချို့နဲ့ သမတ ကိုယ်တိုင် အာဖရိက က ကလေး တွေကို ဒီ world vision အဖွဲ့ကနေ sponsor ယူပြီး ထောက်ပံ့မွေးစားထား တယ် ။ မြန်မာပြည်က ကလေး လဲ ဒီ အဖွဲ့ကနေ sponsor ယူတဲ့သူရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်အချက်အလက် နဲ့ပြည့်စုံ မှလျှောက် လို့ရလဲတော့ မသိ ဖူး ။ ဒီ အဖွဲ့ အကြောင်း လင့်ခ
ပို့ လိုက်တာဘာဘဲလေ…………အံ့သြတယ်..အဲ့ ဒိဆရာလေးလည်း…
သူ ကတော့သိပ်မတည့်ဘူး..အထက်လူကြီးများနြ့ ပေါ့….
ဆာလောင်ခြင်း နာကျင်ခြင်း၊ငတ်မွတ်ခြင်းဆိုတဲ့ ဒုက္ခပေါင်းများစွာနဲ့ ကူညီသူမဲ့နေတဲ့ ကလေးတွေ တွေ့ ရရင်မိဘမဲ့ ဂေဟာကိုဆက်သွယ်ပို့ ပေးကြရအောင်
သီလရှင်ဆရာာတော်ဒေါ်ကီသာရ၊ဒေါ်ဇေယျာနနီéတို့ ဥိးစီးပြုစုစောင့်ရှောက့်တဲ့ 
(၈၁)ရပ်ကွက်၊ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့ နယ်၊ရန်ကုန်မြို့ ၊
အားလုံးသောလူသားများ ၀ိုင်းဝန်းကူညီပါဝင်နိုင်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်လျှက်
ကိုယ်ကျုိုးစီးပွားအတွက် လုံးဝ(လုံးဝ) မျှော်လင့်ထားခြင်းမရှိပါကြောင်း….
လင့်ခ ပါသွား လို့လားမသိဖူး အပေါ်က comment ကို moderate လုပ်ခိုင်း နေတယ် ။ လုပ်တတ် ဖူး ။
အခွင့်အရေး ရပိုင်ခွင့်နဲ့ တိုင်းတယ်ဆိုလားပဲ…………..
သူ တို့ တွေ မေ့ နေကုန်ကြပြီ…
အနာဂတ်ဟာ မျိုးဆက်သစ်များရဲ့ လက်ထဲမှာရှိတယ်တဲ့
INGO တွေကတော့ တကယ် လုပ်ရင်တော့ကောင်းသား။
Sponsor Budget တွေကို အမျိုးမျိုး အကြောင်းပြပြီးသုံးနေကြတာ။
Administration ၁၅% ဆိုပြီး တကယ်တော့ ဘယ်က လိမ့်မလဲ။ သင်တန်းဆို အင်းလျားလိတ်၊ စီဒိုးနား၊ နဲ့သုံးပုံသုံးနည်း က အလကားရတိုင်း လျှောက်သုံးနေကြတယ်။
ခင်ဗျား တို့ တွေ World Vision ရဲ့Sponsorship လုပ်ပုံ လုပ်နည်း အကြောင်းသိရင် ရင်ခံ သွားလိမ့်မယ်။
တကယ် တော့ သူတို့ လုပ်နိုင်တာက ပြောသလာက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းတာက တော့ ဟုတ်ပါတယ် လူ တွေ မကောင်းကြတာ။ လူမျိုး ရေး နဲ့ ဘာသာ ရေး ခွဲခြားမှု တွေ ဒီလောက်များ တဲ့World Vision အဖွဲ့ မှာ မန်နေဂျာ တွေက သူတို့ လူမျိုး ၊ သူတို့ ဘာသာ မဟုတ်ရင် သဘောလောက်ပဲ လုပ်တာပါ။ ကောင်းတာကတော့ ဒီ နိုင်ငံက လူတွေကို အလုပ်ပေးထား နိုင်တာတော့ ကောင်းပါတယ်။
ခင်ဗျားတို့World Vision မှာ အလုပ်လုပ်ချင်ရင် အရင်ဆုံး ဘာမဆိုလုပ်နိုင်ကြောင်း ကြွား တတ်ရမယ်၊ ခရိယာန်လို ဆုကောင်းကောင်း၊ ကြာကြာ နဲ့ ကျယ်ကျယ် တောင်းတတ်ရမယ်၊ ဂစ်တာတီးတတ်ရမယ်၊ ကရင် (သို့ ) ကုလား ဖြစ်ရမယ်၊ အင်္ဂလိပ်လို တတ်တတ် မတတ်တတ် လူရှေ့ မှာ ကျယ်လောင်ကျယ်လောင် ပြောတတ် ၇မယ်။ လူကြီး ကို စစ်သားတစ်ယောက်လို ရိုသေပြ ၇မယ် ဒါဆို အလုပ်ဖြစ်ပြီ။
သာသနာပြုတာ..သူအဲ့ ဒိတုံးကတဲ လေးပါ….
သူ့ တဲ လေးရှေ့ မှာ..မိုးညတညကလေးငိုသံ ကြားလို့ ထွက်ကြည့်တာ..
လာပစ်တယ်လို့ ထင်ရတဲ့ ….ပန်းရံလားကြိမ်ယက်သူလားမသိဘူး…
နောက်ဆုံး..မတွေ့ တဲ့ အဆုံး….သူ ဘဲမွေးစားပြီး…
နောက်ဆိုအမေတွေ က…..အဲ့ ဒိသီလရှင်ကျောင်းရှေ့ ထားခဲ့ ကြတာပါဘဲ….
နောက်တော့လာလှူ ကြတာနဲ့ ကျောင်းဖြစ်သွားတယ်…
ဒဲာ ဒိနေရာကလူတွေ ကအရမ်းဆင်းရဲ ကြတယ်….
အစ ကတော့ဆရာလေးကျောင်းရောက်ဘို့ ….ရေအိုင်ကို…မနဲ ကျော်ဖြတ်ရုန်းရတာပြန်လည်မြင်ယောင်ရင်း……
ဒါက ကျနော်ကိုယ်တွေ့ လေ ဗျာနော်…..
ကျနော်လည်း World Vision အဖွဲ့အကြောင်း နဲနဲပါးပါးသိတယ်။ သူတို့က ခရစ်ယာန်အသင်း ကျောထောက်နောက်ခံပြု လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ ဆိုတော့ အခြားအန်ဂျီအိုတွေနဲ့စာရင် ဘာသာရေး အယူအစွဲပြင်းထန်တယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကိုကလည်း သူတို့ဘာသာကို ဆွဲဆောင်ဖို့ ပါမှာပေါ့ဗျာ။ စာရွက်ပေါ်မှာတော့ ရေးထားချင်မှရေးပါလိမ့်မယ်။ ဘာသာရေးနွယ်တဲ့ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမဆို အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဟာ ကောင်းရင်ကောင်း မကောင်းရင် ပျက်တာပဲ။ ဘာသာရေးနဲ့ ဖုံးကွယ်ထားတော့ အပြစ်အနာအဆာ ရှာဖို့ခက်၊ အချင်းချင်းလည်း မရှာတတ်၊ ရှာရကောင်းမှန်းမသိတာတွေ ဖြစ်လေ့ရှိတယ်။ (ဘယ်ဘာသာမဆို ပြောတာနော်)။
မြန်မာပြည်ကပုံတွေ မယူချင်လို့ အဲ့ ဒိကယူတာပါဗျာ…
ပပျောက်နေပြီလေ..အခု…တဲ ပေါ် ကနေ..တိုက်ပေါ်တင်နေပြိ….
ကဲ သုံးသောင်း……ဘယ်နိုင်ငံ က..ဒိလောက်ပေးလဲ ပြော…
ကလေးတွေကို တကယ်ပဲ စေတနာရှိတယ် ၊ စာနာတယ် ဆိုလျှင် World Vision က ကလေးတွေအတွက် ၀ယ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေစာရင်းကို အရင်စစ်ကြည့်ပါလို့ ပဲ ပြောချင်ပါတော့တယ် ။
ချစ်ခင်လေးစားသော ရွှေအိမ်စည်ရဲ့ … နိဗ္ဗာန်အကျိုးမျှော် နှိုးဆော်ခြင်းကြောင့် … အခွင့်ခါကြုံလျှင် သွားလှူလိုက်ပါဦးမယ် ။
ဆရာလေးရဲ့ ပင်ကိုယ်စိတ်ရင်းစေတနာကို..သူ့ နဲ့ ရင်းနှီးရင်သိလာလိမ့်မယ်….
လောကမှာအမှန်တွေ ပြောရင်ဘယ်သူနဲ့ မှမတည့်တတ်ဘူး…
တခုဘဲ ရှိတယ်..ကျနော်ကသူဌေးတွေ ဆိက..တော့ဖုံးနံပါတ်ပေးပြိးသွားလှူခိုင်းတတ်တယ်..
ဒါဘဲတတ်နိုင်တယ်လေ…။ကျေးဇူးပါအိတုန်ရေ…….အလှူခံတာမဟုတ်ဘူးနော်..သူတို့ အတွက်ရေးထားတဲ့ ကဗျာလေး.တင်ပေးယုံပါ